Milkiilihii Chelsea oo ku sugtay inuu indha beelo kaddib markii la sumeeyey (Yaa sumaynta lagu tuhmayaa?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Milkiilihii Chelsea oo ku sugtay inuu indha beelo kaddib markii la sumeeyey...
Milkiilihii Chelsea oo ku sugtay inuu indha beelo kaddib markii la sumeeyey (Yaa sumaynta lagu tuhmayaa?)
(Hadalsame) 29 Maarso 2022 – Nin hoggaaminaya baarista lagu wado sumaynta lagula kacay Roman Abramovich ayaa sheegay in loo adeegsadey kiimiko loogu digayo bilyaneekan iyo ragga kale inaysan ka hor imanin Kremlin-ka.
Christo Grozev, oo ah baaraha hoggaaminaya kiiska oo la hadlay Bellingcat oo sameeya dabagalka saxaafadeed, ayaa sheegay in bilyaneerkan aan loo qorshaynin in uu ku dhinto suntan taas oo sidoo kale saamaysay laba nin oo Ukraine ah oo wada-hadalka qayb ka ahaa.
Waxa uu u sheegay Times Radio: “Xaddiga suntu ma ahayn mid ku filan in lagu dilo mid ka mid ah saddexda qof, bartilmaameedka ugu wayn se wuxuu ahaa Abramovich. Waana arrin macno samaynaysa.
“Waxaan ula jeedaa, wuxuu si mutadawacnimo ah u ciyaaray … doorka dhexdhexaadiye daacadda ah, laakiin oligarchs-ka kale waxay muujiyeen madax-bannaani ka soo horjeeda mowqifka Kremlin waxayna dhaleeceeyeen (d) dagaalka, sidaa darteed, iyaga ayaa tillaabadan loogu digayey halka Roman laftiisa loo sheegayey in aan loo baahnayn ”dhexdhexaadiye daacad ah”, ayuu yiri.
Dhanka kale, ilo ku dhow MW Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay The Financial Times: ‘in dadkii ay suntani gaartey ay maalintii xigtey indhaha wax ka arki waayeen gebi ahaanba dubkuna uu ka dhacay, islamarkaana aanay weli garanin maadada la adeegsadey oo loogu daray shukulaato.’
Sidoo kale waloow la xaqiijiyey in bartilmaameedku uu Roman ahaa waxaan weli meel la saarin cidda sunta shirka keentay Ruushka iyo Ukraine.
Roman Abramovich oo hadda lafteeda jooga wada-hadallada Turkey ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul ayaa ag fariistay afhayeenka Recep Tayyip Erdogan ee Ibrahimn Kalin iyadoo looga digey inuusan waxba cunin waxna cabin inta uu shirka joogo.
Baaraha Christo Grozev
Previous article”Waxaad noo tihiin laba saaxiib!” – Turkiga oo dhibco ku helaya dhexdhexaadinta Ruushka & Ukraine (Halkee wax marayaan?)
Next articleHaweenay shiish macaan ah oo eber ka dhigtay Ciidanka Ukraine oo gacanta lagu dhigay (Dalka ay u dhalatay?)